connectIPS e-Payment प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ (९ कार्तिक २०७५) :Nepal Clearing House, connectIPS, IPS, Online fund transfer, digital payment, connect ips, NCHL, online payment - Nepal Clearing House Ltd: Electronic Cheque Clearing, Interbank Payment System & connectIPS e-Payment System
connectIPS e-Payment प्रणालीको औपचारिक शुभारम्भ (९ कार्तिक २०७५) October-28-2018
नेपाल क्लियरिङ्ग हाउस लिमिटेडद्वारा बैंक खाताबाट गरिने कारोबारहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नेपाल सरकार लगायत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति तथा बैंक खाताबाट अनलाईन गरिने कारोबारलाई समेत पूर्ण रुपमा लागू गर्न यस अघि परिक्षणको रुपमा सुरु गरिएको अनलाईन राजस्व भुक्तानी र अनलाईन फण्ड ट्रान्सफरमा प्रयोग हुँदै आएको connectIPS e-Paymentलाई Single Payments Platformको रुपमा स्थापित गर्न विभिन्न विशेषता सहित उक्त प्रणालीको Webतथा Mobile Appआज एक कार्यक्रम बीच माननिय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाज्यूबाट औपचारिक शुभारम्भ गरिएको छ । उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालज्यू, राजस्व सचिवज्यू, डेप्यूटी गभर्नरज्यू, महालेखा नियन्त्रकज्यू, बैंक वित्तीय संस्थाका प्रमूखज्यूहरु लगायतका अन्य उच्च पदाधिकारीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यस प्रणाली मार्फत बैंकका ग्राहकहरुले www.connectips.com अथवा Mobile App बाट आफूलाई एकपटक आवद्ध गरी आफ्नो बैंक खातालाई लिंक गराई सिधै आफ्नो बैंक खाता मार्फत कारोबारहरु गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सबै कारोबारहरु अनलाईन मार्फत सिधै बैंक खाताबाट हुने हँदा कारोबार सहज हुन्छ । यस प्रणाली मार्फत नेपाल सरकारको राजस्व भुक्तानी रकम ट्रान्सफर लगायत अन्य सेवाहरु पनि समावेश गरिएको छ । क्रेडिट कार्ड बिल भुक्तानी, मोबाईल वालेटको फण्ड लोड, सेयर, ब्रोकरको भुक्तानी लगायतका अन्य भुक्तानीहरु पनि सजिलै गर्न सक्ने भएको छ । अनलाईन मार्फत प्रति कारोबार रु. १ लाख सम्मको भुक्तानी गर्न सकिने छ भने मोबाईल एप्स मार्फत प्रति कारोबार रु. ५ हजार सम्मको भुक्तानी गर्न सकिने छ ।
connectIPS e-Paymentप्रणालीमा हाल सम्म ४४ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सम्झौता गरिसकेकामा हाल सम्म ३२ वटा बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट उक्त सेवा उपलब्ध भइरहेको छ । कम्पनीले यस प्रणालीमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि आवद्ध गराउदै लैजाने योजना रहेको छ । उक्त प्रणालीलाई Single Payments Platformको रुपमा स्थापित गर्न बैंक वित्तीय संस्था लगायत अन्य PSPs(भुक्तानी सेवा प्रदायक) हरुलाई पनि आवद्ध गरेको छ । यस प्रणालीको पूर्ण सञ्चालन पश्चात नेपाल सरकारलाई बुझाउने कर, शुल्क वा दस्तुर लगायत अनलाईन रकम ट्रान्सफर तथा ई–कमर्श मार्फत सेवा/ वस्तुहरुको भुक्तानीहरु बैंक खाताबाट सोझै गर्न सकिने हुन्छ भने नेपालको राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली पूर्वाधारलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा पु¥याउन समेत सहयोग गर्ने विश्वास कम्पनीले लिएको छ ।